राजविराजमै स्तन क्यान्सरको सफल शल्यकृया - Janakpur Today
राजविराजमै स्तन क्यान्सरको सफल शल्यकृया
in कला, समाज, स्थानीय समाचार, स्वास्थ्य
फोटो : न्यूज टुडे
सप्तरी । राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अंचल अस्पतालमा स्तन क्यान्सरको सफल शल्यकृया गरिएको छ । पछिल्लो समयमा जटिल शल्यकृया समेत गर्दै आएको यो अस्पतालमा एक बृद्वामा देखापरेको स्तन क्यान्सरको सफल शल्यकृया गरिएको हो ।
सप्तरीको बिष्णुपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ जमुनी मधेपुरा १ निवासी दुखनीदेवी खंग अस्पतालमा गत पुस ८ गते जचाउँन आउँदा उनको दाहिने स्तनमा क्यान्सर भएको फेला परेको थियो । बुधबार मात्रै चिकित्सकहरुले उनको स्तन क्यान्सरको सफल शल्यकृया गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चुमनलाल दासले जानकारी दिए ।
६० बर्षीया खंगको डा. राजीब मिश्राको टोलीले सफल शल्यकृया गरेको उनले बताए । झण्डै साढे तीन घण्टा लगाएर स्तन क्यान्सरको सफल शल्यकृया गरिएको छ । यो शल्यकृया क्यान्सर अस्पतालसहित बीर र टिचिङ्गसहित केहि अस्पतालमा मात्रै हुने गर्दछ ।
पाँच स्थानीय तहमा विदा
घाइतेलाई भेटे मेयर साह, आज पेनडाउन